Admin | warsanradio baydhabo
Ciidamada Dalka Suudaan oo Dilay Dad shacab Ah oo banaanbaxyo Dhigayay.
Ciidamada ammaanka ee dalka Suudaan ayaa toogasho ku dilay 7 qof, tiro kalena dhaawacay markii ay rasaas nool-nool u adeegsadeen dibed baxayaal si nabad ah u dhigayay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan afgembigii ay sanad ka hor sameeyeen Ciidanka Millateriga, sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah hoggaamiyayaasha isbeddel doonka dalkaasi.
Hoggaamiyayaasha isbeddel doonka ayaa sidoo kale sheegay in kumanaan qof oo isugu soo baxay afaafka hore ee madaxtooyada dalka Suudaan lagu kala eryay rasaas iyo gaaska dadka kaga ilmeysiiya.
Tan iyo markii uu is casilay Ra’iisul wasaarihii dalka Suudaan Cabdalla Xamduuk horraantii bishan waxaa isa soo tarayay dibed baxyada lagaga soo horjeeda millateriga talada qabsaday ee uu hoggaamiyo Janaraal, Cabdul casiis Al-burhaan
Ciidamada Dalka Suudaan oo Dilay Dad shacab Ah oo banaanbaxyo Dhigayay. was last modified: January 18th, 2022 by Admin
Rooble;”Xukuumadu Waxay Ku Dhaqmeysaa Siyaasad Ku Saleysan Maslaxadda Ummadda “ was last modified: January 14th, 2022 by Admin
War qoraalka ah oo ka soo baxay Madaxweynaha maamulka Puntlnd Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa waxaa lagu magacaabay guddoomiyaha cusub gobolka Bari, waxaana loo magacaabay Cabdirisaaq Cali Saciid.
Qoraalka soo baxay madaxweyne Deni ayaa u qornaa sidan:.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray Xeer Madaxweyne Lr. 001 ee 13-ka January 2022, kuna saabsan magacaabid Guddoomiyaha Gobolka Bari.
Deni oo guddoomiye cusub u magacaabay gobolka Bari was last modified: January 14th, 2022 by Admin
Dowladda itoobiya oo cafis u fidineeyso hogaamiyayaasha kooxda Mucaaradka
Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay cafis u fidin doonto oo ay sii deyn doonto qaar ka mid ah maxaabiista siyaasadda ee ugu caansan dalkaas, sida hoggaamiyaha mucaaradka Jawar Mohammed iyo saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga Tigreega.
Ku dhawaaqista siideeynta maxaabiista ayaa timid kadib markii ra’iisul wasaare Abiy Axmed uu soo saaray bayaan uu ku baaqayo “dib u heshiisiin qaran”
liiska lasoo saray ayaa waxaa ku jiro dhowr hogaamiye oo ka tirsan kooxda TPLF (Tigray People’s Liberation Front), kuwaas oo ciidamadoodu ay dagaal ba’an kula jiraan ciidamada dawladda ee waqooyiga Itoobiya tan iyo bishii Nofembar 2020, waxaana sidoo kale kujiro hoggaamiyeyaasha caanka ah ee mucaaradka Oromada iyoAmxaari.
Ilaa hadda ma cadda tirada cafiska ee la sii daayay, Waxaysa noqoneysaa tillaabadii ugu yaabka badnayd ee ay qaado dowladda tan iyo markii uu dagaalka Tigreega uu galay waji cusub dabayaaqadii bishii December, markaasoo ciidamada Tigreegu ay isaga baxeen deegaankooda oo ay duulaan militari ku qaadeen.
Warbaahinta dowladda Itoobiya ee EBC, ayaa magacawday Jawar iyo Eskinder Nega, kuwaas oo la xiray bishii Luulyo 2020, iyaga oo lala xiriirinayo dilka fanaankii caanka ahaa ee Oromada Hachalu Hundessa, kuwaas oo cafis loo fidiyay.
Dhanka kale Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale amar ku bixiyay in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyada ka dhacay Itoobiya
Dowladda itoobiya oo cafis u fidineeyso hogaamiyayaasha kooxda Mucaaradka was last modified: January 8th, 2022 by Admin
Dowlada Kenya Oo Bandow Ku Soo Rogtay Gobolka Lamu
Dowladda Kenya ayaa bandow soconaya habeenkii oo dhan waxa ay ku soo rogtey gobolka xeebta ee Lamu, kadib markii toddobo qof, oo laba kamid ah ay qoorta laga jaray lagu diley gobolka Lamu.
Wasiirka amniga gudaha, Fred Matiangi, ayaa sheegay in bandowga uu yahay xeeladaha ka kaalmeynaya ciidamada ammaanka, sidii ay u gaarsan lahaayeen kooxihii dhibaatada geystay.
Dhawr ruux oo la tuhunsan yahay ayaa la xirey, sida uu sheegay afhayeenka booliiska. Inkasoo ay ciidamada ammaanka Kenya iyo kuwa Mareykanka ay kusugan yihiin Lamu, haddana Al shabaab oo xiriir la leh Al Qaacida waxey dhawr jeer weeraro ka geysteen gobolkani, kuwaasoo ay ku diley tobanaan qof, guryana ku gubey halkaasi.
Weerarkii ugu danbeeyey ee dhacey Isniintii, ayaa waxaa lagu diley shan qof, halka laba qofna la gawracey.
Dowlada Kenya Oo Bandow Ku Soo Rogtay Gobolka Lamu was last modified: January 6th, 2022 by Admin
Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa beenisay warar sheegayay in shirka golaha wadatashiga uu burbur ku dhaw yahay isla markaana uu xoogeystey khilaaf ka dhashay cidda ammaanka dalka hogaaminayso
Afhayeenka xukuumada Maxamed Ibraahin Nuur ayaa bartiisa facebook waxa uu ku sheegay inay socdaan doodo adag oo ay madaxdu yeelanayaan.
“Shirka Gollaha Wadatashiga Qaran waxa uu galay maalinkii 4aad, waxa socda doodo adag oo ay Madaxdu ka yeelanayaan qodobo quseeya hufnaanta doorashada iyo amniga. In si qalbi furnaan ah loo doodo waxa ay dawo u tahay in xal kama dambeys ah laga gaaro qodobada lagu kala aragti duwan yahay. Kulamada Madaxdu waa kulamo guud iyo kuwa gaar gaar ah.”ayuu yiri Macalimuu Afhayeenka xukuumada.
Sidoo kale afhayeenka xukuumada ayaa dhaliilay dadka qaar ee baraha bulshada soo gelinaya warar been abuur ah.
“Dadka baraha bulshada xumaanta ku warinaya ee la wareegaya wararka dhiilada xambaarsan ee xaqiiqda ka fog waxa wanaagsanaan laheyd in dalka iyo dadkaba ay u rajeeyaan wax wanaagsan.”
Si kasta ha ahaatee wararka ka imanaya shirka madasha qaran ayaa sheegaya in weli la isku mari la’ yahay qodobada qaar inkastoo ay socdaan weli dadaalo lagu doonayo in lagu xaliyo kala aragti duwanaanta.
Dowlada Oo Beenisay In Burbur Uu Ku Dhaw Yahay Shirka Golaha Wadarashiga Qaran was last modified: January 6th, 2022 by Admin
Shirka golaha wadatashiga Qaranka oo galay maalintii 4-aad.
Waxaa maalintii afaraad galay shirka Golaha Wadatashiga qaranka ee ka socda Magaalada Muqdisho oo looga hadlayo Arrimaha Doorashooyinka & Amniga Dalka si loo meel-dhigo qorshaha geedi-socodka Soomaaliya.
Madaxda golaha wadatashiga Qaranka ayaa seddexdii maalin ee la soo dhaafay waxaa ay Warbixino ka dhageysteen Midowga Musharrixiinta, xubnaha Beesha Caalamka, Ururada Bulshada rayidka iyo xubno ka socday Haweenka.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxda Golaha wadatashiga Qaranka ayaa waxaa ay shalay aad uga doodeen Arrimaha Amniga oo uu Ra’iisul Wasaaruhu uu codsaday in lagu wareejiyo, waxaana la sheegay in arrintaasi ay kula aragti duwanaadeen Madaxda Dowlad Goboleedyada.
Xogta ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay in hadii aan lagu wareejinin amniga dalka aan la qaban karin doorashooyinka.
Waxaa lagu wadaa in madaxda golaha wadatashiga Qaranka ay maanta sii wadaan doodooda ku aadan arrimaha amniga iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ee loo qaban karo doorashooyinka Soomaaliya.
Madaxda golaha wadatashiga Qaranka ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan la filayo in ay warmurtiyeed ka soo saaraan shirkooda
Shirka golaha wadatashiga Qaranka oo galay maalintii 4-aad. was last modified: January 6th, 2022 by Admin
Dowladda Soomaaliya oo bilowday bixinta deeqaha loogu tala galay gurmadka Abaaraha
Guddiga Gurmadka Abaaraha ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa bilaabay qeybinta qoondadii lacageed ee Dowladdu ugu talo gashay gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen,iyagoo maanta qoondo lacageed ku wareejiyay Dowlad-goboleedyada dalka.
was last modified: January 5th, 2022 by Admin
Muwaadiniin Soomaali Ah Oo Xalay Dil Iyo Dhaawac Loogu Geystay Koonfur Afrika
Koox hubeysan oo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa habeenimadii xalay aheyd Muwaadiniin Soomaaliyeed dil iyo dhaawac ugu geystay duleedka Magaalada Johannesburg ee dalkaas Koonfur Afrika.
Burcada hubeysneyd ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday Dukaaman Muwaadiniinta ku lahaayeen deegaanka Soweto oo dhacda duleedka Magaalada Johannesburg, xili la xirayey Dukaamanka, iyagoona muwaadiniinta lagu furay rasaas farabadan.
“Xilligii dukaanka la xirayey ayey 3 Nin oo hubaysan yimaadeen, dukaanka fura ayey dhaheen Axmed oo ahaa Yarkii xiraayey albaabka, markii uu isku dayey inuu ka cararana Madaxa ayey Xabad uga dhufteen waana Dhaawac culus oo Koomo ayuu ku jiraa” ayuu yiri Maxamed Yuusuf oo kamid ah Muwaadiniin Soomaaliyeed oo goobta ka agdhawaa.
Allaha u naxariistee Cabdi Jimcaale Cali ayaa noqonaya Muwaadinkii ugu horreeyay ee sanadkaan bilowga ee 2022 lagu dilay dalka Koonfur Afrika oo sanadkii tegay ee 2021 dilal, dhaawac iyo boob loogu geystay Muwaadiniin Soomaaliyeed oo halkaas ku lahaa goobo Ganacsi, mana jirto cid iska xil saartay wax ka qabashada dhibaatada taagan
Muwaadiniin Soomaali Ah Oo Xalay Dil Iyo Dhaawac Loogu Geystay Koonfur Afrika was last modified: January 5th, 2022 by Admin